Ogaden News Agency (ONA) – Waqooyi Kuuriya oo Tijaabisay Gantalkoodii Ugu Tayada Sareeyay.
Waqooyi Kuuriya oo Tijaabisay Gantalkoodii Ugu Tayada Sareeyay.
Kuuriyada Waqooyi ayaa ku guulaysatay tijaabinta gantaalkoodii ugu tayada sareeyay oo xambaari kara bambaanada Nukliyeerka. Gantaalkan ayaa hawada Sare u galay illaa 4500 km, midaasi oo ka dhigeysa gantaalkoodii ugu sareeyey oo ay illaa iyo hada tijaabiyaan.
Wuxuu gantaalkan tijaabada ah kusoo dhacay badda meel 1000 km dhinaca bari uga beegan wadankaasi, goobta uu ku dhacay ayaa aad ugu dhaw wadanka Japan oo heegan galay xiligii gantaalkaasi lasoo tuuray. Khubarada isha ku heysa barnaamijka nukliyeerka iyo hubka gantaalada ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in gantaalkan oo hawada ku jiray in ka badan 50 daqiiqo uu yahay mid gaari kara inta badan dhulka Maraykanka oo ah yoolkooda 1aad.
Tijaabadii Gantaalkan ayaa daliil u ah in wadankaasi Kuuriyada Waqooyi uu horumar weyn ka sameeyey dhanka sameysta gantaalada isaga gudbi kara qaaradaha. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa si kooban arrintan uga hadlay isagoo sheegay inay dowladiisa ay tilaabo qaadi doonto walow uusan wax faah faahin ah arrintan ka bixin.
Donald Trump ayaa dhawaan dib uga soo noqday safar uu ku marayey qaarada Aasiya isagoo xiligaasi sheegay inuu ku guuleystay in cadaadis xoogleh saaro wadankaasi Kuuriyada Waqooyi oo hada u muuqda inuu sare usii qaaday barnaamijkooda Nukliyeerka.